Living Word asa fanompoana
Ny Tempoly Faminaniana
Taranaky ny Lalàna
Ny fahatakarana 666
2016-2017 Faminaniana ao amin'ny Baiboly
Fototra fahadisoan'i Preterism
Fianarana Ao amin'ny Daniela
Daniel 10-12 (Fizarana 1)
Ny Jiosy no Isiraely
Ny toerana dia bebe kokoa amin'ny fampianarana bebe kokoa, fa ny piandohana dia Daniela mpaminany, ary ny 70 herinandro faminaniana. I Daniel mihevitra ho toy ny fanalahidy lehibe ny Baiboly. Efa nanazava ny fomba miasa ny 70 herinandro, fa mbola aho mba hitady olona iray izay mahalala; dia amiko. Mieritreritra aho fa mila aho hanatsarana ny fianarana miaraka amin'ny fanazavana tsipiriany kokoa, ary feno famelabelarana tamin'ny voalohany 7 boky Daniela.
Aiza Averiko mpanoratra hafa, izany tsy midika aho voatery nanaiky ny fomba fijeriny. Matetika ny olona dia manome loharano mahasoa izay afaka pelatànana amin'ny.
Araka ny hitanareo, ny fianarana rehetra dia Misy video toy ny PDF, ny kisary mena kely amin'ny ambony havanana. Nanao izany aho satria mora kokoa ny fitaovana ao amin'ny navigateur (na PDF mpijery) hitako noho ny olon-tsotra lahatsoratra tranonkala. Tamin'ny zava-nitranga inoana fa ny fianarako ny hevitrao tsara dia tena te-pirinty azy ireny, dia aza misalasala. No itokiako dia mitana ny zavatra amin'ny hivadika. Ny hany fampitandremana aho dia hanome dia mba manova ny fandinihana amin'ny manaraka teboka. Dia mazava ho azy aho Ho faly ny hahazo tsikera.
Rehefa miverina Jesosy dia afaka na oviana na oviana isika dia tokony ho vonona amin'ny fotoana rehetra. Na inona na inona daty omeko, dia tsy maintsy manao ny fikarohana sy ny fandraisana ho mpikambana. Ny zavatra rehetra dia manoratra sitrapon'ny Mazava ho azy fa ho fahazavan-tsaina, ary ny zavatra rehetra ilaina nilanja sy hitsapana ny tenanao manohitra ny Tenin'Andriamanitra.
Comments avy ny ankehitriny, ka amin'izao fotoana izao dia aza misalasala mampiasa ny fifandraisana endrika raha manana fanontaniana.